Booliska oo shaaciyey inta ay xirnaanayaan jidadka Muqdisho | Xaysimo
Home War Booliska oo shaaciyey inta ay xirnaanayaan jidadka Muqdisho
Booliska oo shaaciyey inta ay xirnaanayaan jidadka Muqdisho
” Wargelin; Shacabka G/Banadir waxaa si sharaf leh laga codsanayaa inay inoo dulqaataan intuu socda shirka caalamiga ah ee Somali Partnership Forum oo dartiisa loo adkeeyay isku socodka baabuurta magaalada. Waxaa idiin diyaarinay Ambulance gurmad dag dag ah idinku adeegno. Hadii aad u baahatid gurmad caafimaad deg deg fadlan wac 991 kana codso ciidanka boliiska. Horumarkeena waxuu ka dhashaa wadashaqeyntena” ayey tiri Zakiya.